Umlando Wokulondoloza Imikhankaso - Amalungelo Abantu Nezithombe Zokukhanya ngu-∴ PixelHELPER Foundation
Nazi imisebenzi yethu ebalwe endaweni yomkhankaso.
Izenzo ezifanele kufanele zivele zitholakale.
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 10. Apreli 2020
Isicelo sezakhamizi sokusindisa umtholampilo waseLoreley ngommeleli Kwangathi 21st, 2020Oliver Bienkowski
Sithumela iKing Vajiralongkorn emuva eThailand!
Sithumela iKing Vajiralongkorn emuva eThailand! Kwangathi 21st, 2020Oliver Bienkowski
16 uJan 2020
I-Vogelschiss gegen Hass - Ikhadi elibomvu labathumeli abanenzondo
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 16. January 2020
Shit ubuyile namuhla, ngokumelene #Izonda manje kukhona eyodwa enetheni Antidote. @PixelHELPER ithumela ukulahlwa kwezinyoni kubo bonke abasakaza inzondo. Nikela ku- paypal@PixelHELPER.tv & usibhalele okufanele uthole ukulethwa okulandelayo. Incwadi 1 iya @_donalphonso kusuka ku @world
Esithunzi sokuziphatha sokufakwa kobuciko #Fencing4Humanity, isithombe somngcele ongaphandle waseYurophu, izinyoni zokuqala sezizinzile. Kusuka lapha manje sekukhona #Ibhakhiti Shit ngokumelene #Izonda walwa ku-Intanethi.
Isikhungo seVogelschiss eMorocco
EMaride ekude njengamanje sakha indawo yethu yeVogelschiss ukuthumela imvilophini encane ye-Vogelschiss encane kubantu abazibhalela nge #HateSpeech.
Izinyoni zithatha kahle isitshalo sethu
Inyoni isebenza ngokumelene nenzondo
Ukwakhiwa kwesikhungo sethu sezinyoni
I-Vogelschiss gegen Hass - Ikhadi elibomvu labathumeli abanenzondo Ngo-Ephreli 21st, i-2020Oliver Bienkowski
Siyinkonzo yezobunhloli ezimibalabala - yokubamba iqhaza ngokwentando yeningi
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 20. Apreli 2014
Imiyalezo iyavela futhi isakazeka emhlabeni wonke umzuzwana. Ngokuya kwezinye izindaba, umhlaba ubukeka uguquka ngendlela ehlukile kunangaphambili. Imiyalezo ithinta izimpilo zethu. Sivuka nawe futhi sikuhambise ebusuku. Akunandaba ukuthi kukuphi emhlabeni lapho uvemvane luthela amaphiko alo nganoma isiphi isikhathi. Futhi kunokuvela okuthile okunencazelo kithina. Ubuchwepheshe besimanje buye benza umhlaba waba mncane. Kepha izingxabano zesifunda nezomhlaba wonke zibonakala zikhula. Miningi imibuzo ongayethemba. Yiluphi ulwazi olusathembekile nokuthi ngabe ukuthula nokuchuma eJalimane kuyaqhubeka nokuba khona. Yilapho kuqala khona umsebenzi wethu. Futhi kunethiwekhi yamanye amazwe sakha izisekelo ezinokwethenjelwa, kwesinye isikhathi ezisengozini enkulu, ngoba kuthatha ubude bengalo ukwenza ngokuzibophezela. INechger futhi ethembekile ukuzibophezela ukuvikela iJalimane.
Faka isicelo manje - wezwe elinemibala engaphezulu!
I-TED Khuluma ngokumelene nokubhekwa
I-Surveillance State: "I-NSA eNdlu"
I-United Stasi yaseMelika wama odongeni lwenxusa laseMelika eBerlin nakwamanye amazwe aseMelika eJalimane, kufaka phakathi iDüsseldorf, iFrankfurt kanye neHamburg. Isizathu salokhu ukuhlolwa okungenamahloni ku-NSA kanye nensizakalo eyimfihlo yaseMelika.
I-NSA ivikela amasu ayo okuqapha njengoba kudingeka ukuze silwe nobuphekula. Ngaphezu kwalokho, kuqondisa ngokwayo ngokuthi, "Uma ungenalutho lokufihla, awunaso ukwesaba". Ngeshwa, ukubhekwa kwe-NSA kuqhubeka kakhulu ngokumelene nokulwa nokuthuthumela. Ifoni yakho, i-Skype, i-Whatsapp izingcingo zingabhekwa, yize ungahlangene nama-amaphekula, usebenzisa isimiso se "3rd Degree Friend".
Ngaphezu kwalokho, lezi mboni zokuqapha zivimbela kuphela ukuhlaselwa kwe-4. Ingabe kuwufanele ukubaluleka kwethu ngokuphepha okubonakalayo kodwa okungekhona okungapheliyo? I-PixelHELPER ayikholelwa kuyo, yingakho saqala lo mkhankaso.
Ukuphumelela kokuqala ngemuva kokubonakala kwe-13 ukukhanya, ngesigqi samasonto onke kanye nokufakwa kwezindaba ezinkulu:
Ukuhamba komphathi we-CIA wesilisa ophezulu we-CIA.
Siyinkonzo yezobunhloli ezimibalabala - yokubamba iqhaza ngokwentando yeningi Ngo-Ephreli 21st, i-2020Oliver Bienkowski
25 Kwangathi 2013
Kusuka ku-Rainbow - amabhuloho wobuciko bokukhanya
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 25. May 2013
Ukucabanga isenzo sokulinganisa ngaphezulu kwesibhakabhaka.
Ukukhanya okungapheli komvula kwakhanya ngoMgqibelo kusihlwa edolobheni laseDüsseldorf edolobheni.
Umkhankaso “Ovela Efuthwini” i-PixelHELPER imele ukubekezelela okwengeziwe futhi iphikisane nenzondo.
Uthingo lufanekisela ithemba nokuphelela. Noma nini lapho abantu bebona uthingo, into eyodwa iyaqiniseka: ubumnyama nemvula abugcini izwi lokugcina.
Iphrojekthi yezobuciko obukhanyayo "Okuvela ku-Rainbow" eyenziwe ngu-Oliver Bienkowski iphrojekthi eqhubekayo lapho amabhuloho owaziwayo, izakhiwo nokwakhiwa kwamadolobha kuguqulwa kwenziwa amabhuloho abizwa ngokuthi ama-rainbow. Kuze kube manje, ibhuloho likaKarl Branchner eKassel nalo lakhiwe kabusha ngaphezu kwebhuloho lesikebhe ethekwini lezindaba laseDüsseldorf. Le phrojekthi ihlukanise abantu eDocumenta futhi yathuthukisa ukudonsa okuqinile kubavakashi bamazwe aphesheya. ISango laseBrandenburg liphinde lajika laba yisibhakabhaka soMkhosi Wokukhanya. UKasseler Bergpark Kaskaden owaziwayo, oyingxenye ye-UNESCO World Heritage Site, usevele wapenda uthingo. Nalokhu, umculi ukhankasela ukubekezelela okuningi nokulwa nenzondo.
Kusuka ku-Rainbow - amabhuloho wobuciko bokukhanya Kwangathi i-6th, i-2020Oliver Bienkowski
Ukuchithwa kwamahlathi esikhundleni sezimayini zomhlaba ngokumelene nokushintsha kwesimo sezulu
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On I-5. Novemba 2011
Ukulahla imicibisholo yesihlahla ngezithombo eziqediwe kanye nomanyolo
Ukuchithwa kwamahlathi esikhundleni sezimayini zomhlaba. Iphephandaba elikhulu kunawo wonke eMorocco libika namhlanje ngesicelo sethu ePhalamende lase-Australia ukucela iKing Moroccan ukuthi isinike indiza enomhlaba iHercules-C130 ukuze sikwazi ukuyiguqula ibuye kabusha amahlathi aseMorocco nase-Australia. Ifektri encane lapha esiseMoroccan indawo yethu kufanele ikhiqize amadada esihlahla, abese alahlwa. Ngaphandle kosizo lweNkosi yaseMorocco, akukho esingakwenza. Njengoba engaphendulanga ezincwadini zethu zokugcina, asicabangi ngamathuba athile, kodwa sijabule ngezimanga ezinhle.
Imicibisholo yesihlahla kusuka kwiphrinta ye-3D
Ukuchithwa kwamahlathi esikhundleni sezimayini zomhlaba ngokumelene nokushintsha kwesimo sezulu Ngo-Ephreli 21st, i-2020Oliver Bienkowski
22 Kwangathi 2011
Ubani obuka abalindi. Umkhankaso wokulwa nokubhekwa
Okuthunyelwe okunamathelayo By Oliver Bienkowski On 22. May 2011
futhi I-United Stasi yaseMelika wema phezu kwezindonga ze-American Embassy eBerlin namanye ama-consulates aseMelika eJalimane, kuhlanganise naseDusseldorf, eFrankfurt naseHurgand. Isizathu salokhu ukuhlola okungenamahloni eNSA nasevisi yaseMelika eyimfihlo.
Ubani obuka abalindi. Umkhankaso wokulwa nokubhekwa Ngo-Ephreli 21st, i-2020Oliver Bienkowski
???????????? Yethu engeyona inzuzo ayikwazi ukwenza ngaphandle kweminikelo yakho ??????????????????? ?????????
kwezikhali Uhlelo lokusebenza lwe-Android I-Bahrain 13 Chancellery Federal Insizakalo yezobunhloli yamazwe Insiza yezobunhloli enemibala ehlathini umlilo China ukuxhaswa kwezixuku umlilo sokuhlushwa freeRaif ukukhululwa kwemibono yamahhala hercule usizo lwabantu umkhankaso imikhankaso Catalonia esibhedlela Landmines Uthando alukwazi imingcele zokusakaza Ukusakaza bukhoma Usizo lwe-swarmream lwangaphakathi Loreley Morocco imayini I-NSA endlini Oberwesel iziboshwa zezombangazwe Rainbow for Orlando zempi I-Saudi Arabia uswebezane Usizo spring spring Spirulina Uighurs isi-Uyghur ukulondolozwa ukuzimela I-United Stasi yaseMelika upcycling ukuhweba ngezikhali Yebo siyaskena! ukuqapha